पोखराको पेवा फेवामा जलकुम्भीले राज गरेपछि फेवाको सुन्दरता हराउने चिन्ता बढ्यो (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
पोखराको पेवा फेवामा जलकुम्भीले राज गरेपछि फेवाको सुन्दरता हराउने चिन्ता बढ्यो (भिडियो)
१. पोखराको पेवा फेवामा जलकुम्भीले राज गरेपछि फेवाको सुन्दरता हराउने चिन्ता बढ्यो
पोखराको पौरख हो फेवाताल । पोखरालाई सबैको पोखरा बनाउने हैसियत राख्ने ताल हो फेवाताल । तर यही फेवाताल कुरुप बन्दै गर्दा अब पोखराको आकर्षणमाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्न थालेको छ । जलकुम्भीले फेवातालको जलमा राज गर्दा फेवातालको सौन्द्धर्यमा नै ठूलो क्षति पु¥याउदै गएको छ ।
लमतन्न परेर सुतेको फेवातालमा जलकुम्भीले सिरक ओढे झै गरेर राज गरेपछि अब भने यसतर्फ पोखरा महानगरपालिकाको ध्यान पनि तानिएको छ । फेवातालमा जलकुम्भीको राज नौलो नभए पनि यो समस्याले बारम्बार पोखराप्रेमीहरुलाई नै झस्काउदै आएको छ । तर अब जलकुम्भीको जालो तोडेरै छोड्ने अठोट पोखरा महानगरपालिकाले लिए पनि यो चुनौती सहज भने छैन ।
२.अस्फाल्ट कंक्रिट प्रविधिको प्रयोगबाट पोखराका सडकहरुलाई चिल्ला र दीर्घजीवि बनाइदै
स्मार्ट बन्ने रहर गरिरहेको पोखराका लागि सडकको समस्या पनि सदैव चुनौती बन्दै आएको छ । तर अब पोखरा महानगरपालिकाले पोखराको सडकमा नयाँ तथा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर पोखरावासीलाई खुसी पार्ने अभियानमा जुटेको छ ।
अस्फाल्ट कंक्रिट प्रविधिको प्रयोग गरेर पोखराका सडकहरुको व्यवस्थापन कार्य अघि बढाइएपनि अब भने पोखराको सडकले नयाँ रुप पाउने पक्का भएको छ । अस्फाल्ट प्रविधिबाट बनेको सडक ८ देखि १० वर्षसम्म टिक्ने हुनाले पनि कालोपत्रे गरेको २÷३ बर्षमा नै भत्किने नेपालको पुरानो शैलीबाट पोखराका सडकले अब मुक्ति पाउने भएका छन् ।
३. पोखराको राम मन्दिरमा भगवान राम र माता सीता साक्षात प्रकट हुने विश्वास
हिन्दू बहुल नागरिक भएको मुलुक भएकोले पनि नेपालका हरेक स्थानमा रहेका बिभिन्न देवीदेवताको मन्दिरले विशेष महत्व पाउने गरेका छन् । त्यसमाथि पनि दक्षिणको छिमेकी भारतबाट आउने पर्यटकहरुलाई पनि नेपालका बिभिन्न देवी देवताको मन्दिरले आकर्षित गराउदै आएको छ । यही मेसोमा पोखराको विरौटामा रहेको राम मन्दिरले पनि आम भक्तजन तथा तीर्थालुको ध्यान तान्दै आएको छ ।
चैतमा पर्ने रामनवमीमा भगवान राम र माता सीताको साक्षात स्वरुप प्रकट हुन्छ भन्ने आम विश्वासले पनि यो मन्दिरप्रति नेपाली र भारतीय तीर्थालु तथा भक्तजनको आकर्षण बढ्दो छ ।